Tag: waalli macaan | Martech Zone
Tag: waalan macaan
Arbacada, Maarso 16, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Sannadkii 2015, waxaa jiray celcelis ahaan 11.3 milyan oo wadarta guud ee daawadayaasha 'NC Madness of March Madness', oo ay weheliso rikoor 80.7 milyan oo daawadayaal toos ah oo fiidiyoow ah. Ciyaarta ugu daawashada badan waxay soo jiidatay 28.3 milyan oo wadarta daawadayaasha ah. Haddii aadan u maleyneynin inay tahay wax weyn, waa inaad isku daydaa inaad ka shaqeyso bartamaha magaalada Indianapolis bishaan (halka ay xafiisyadeenu ku yaalliin)! Waxaan ka shaqeyn doonnaa guriga inta badan bisha. Xogtan macluumaadka ah ee ka socota Koeppel Direct waxay muujineysaa fursadaha weyn ee sumadaha iyo suuqleyda ay tahay inay gaaraan
Wednesday, April 1, 2015 Talaado, Maarso 31, 2015 Douglas Karr
Iyada oo Maarso Madness Macaan Lix iyo toban ciyaarood ay socoto, Isku-darka ayaa u maleynayay in tani ay noqon doonto waqti ku habboon in looga faa'iideysto himiladooda shakhsiyadeed ee xiisaha isboorti. Isku-darka cusub ee 'Integrated infographic' waa mid waqtigiisa ku habboon, oo si xiiso leh loo adeegsado sawir-gacmeedka, laakiin waxaan rajeynayaa sarbeebno kubbadda koleyga si loo muujiyo faa'iidooyinka otomaatiga dadaalka jiilka saddexaad. Qodobbada muhiimka ah ee xog-ururinta waxaa ka mid ah: Dambiga Xun - Hawlaha gacanta iyo waqtiyada falcelinta oo gaabis ah Dembiga Weyn - Aaladda iswada si loo helo fursado badan Difaaca Xun